သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): Laptop Computer ASUS ရောင်းရန်ရှိသည်။ တန်ဖိုး ငါးကျပ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 21:25
ငါးကျပ်နဲ့ (မြန်မာငွေပြောတာနော်) ၀ယ်မယ်ကြံကာရှိသေးတယ်၊ ကောင်းသွားပြန်ပီဆိုတော့ မရောင်းတော့ဘူးပေါ့။ ၀မ်းသာပါပေ့ဗျား။
Saturday, 13 March 2010 at 23:15:00 GMT
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်း ဆရာပန်းရေ....; )
Sunday, 14 March 2010 at 00:08:00 GMT
Sunday, 14 March 2010 at 01:31:00 GMT
နောက်ဆိုရင် အကြံရပြီ ညီမရဲ့ ကွန်ပျူတာလဲ တခါတလေ ပေကပ်ကပ်လုပ်နေရင် ရောင်းရန် ကြော်ငြာတင်လိုက်မယ်း)
Sunday, 14 March 2010 at 02:08:00 GMT
ဝယ်မယ်လို့ ပြောမလို့ပါဆိုနေမှ ပဲ အကိုရာ။
နေကောင်းတယ်ဟုတ်။ မတွေ့တာတောင် ကြားပေါ့နော်
Sunday, 14 March 2010 at 04:52:00 GMT
နောက် ခွန့်pc ပေကပ်ကပ်လုပ်ရင်လဲ
ဖတ်နေရင်း စပါးကျီဆိုလို့ အိမ်ကိုသတိရသွားတယ်။
Sunday, 14 March 2010 at 06:59:00 GMT
တကယ် ရောင်းမှာလား လာဝယ်မှာနော်
အဲလိုပဲ သယ်ရင်းရေ. . . အရေးကြုံရင် ကွန်ပျူတာ တို့ အင်တာနက်တို့ က ဖြစ်ရော
သယ်ရင်း အဆင်ပြေသွားတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်. အိုင်ဒီယာကောင်းလို့ပေါ့နော်
Sunday, 14 March 2010 at 08:15:00 GMT
ဟီးးး စာနာတယ် ဂျသိလား ကွန်ပြူတာပျက်နေရင် စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ နေမရဘူး စားမဝင် အိပ်မပျော်နဲ့ ဟဲဟဲ တယ်ဆိုးတယ် ကွာ သိလား များ တို့က အင်တာနက် မရှိရင် မနေတတ်ဘူး ဂျ ဟားးးးးးးးးးဟားးးးးးးးး
နောက်တခါ ပျက်ရင် ပြောလေ ကူပေးမယ် အိုးးး ရှုပ်ပါတယ် တူနဲ့သာ ထုလိုက်ဟိဟိ
Sunday, 14 March 2010 at 16:15:00 GMT
ပင်လယ်ဘူးမှာ အစ်မက တစ်လကျော် ၂လနီးပါး အလည်ရောက်ခဲ့ဖူးပါ့..
အဲဒီချိန်က ကော်လင်းကနေ ပင်လယ်ဘူးကို ကားစီးရတာ
ဇကောထဲဆီးဖြူသီး လိမ့်သလိုပါလား.. တစ်လမ်းလုံး မူးဝေအော့အံ ပေါ့..
ဆိုနီကင်မရာ..ရောင်းရန်ရှိသည်။ တလုံး ၁ကျပ်
ဆမ်ဆောင်းဖုန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ တလုံး ၁ကျပိ
နောက်..အဲ.. လူရောင်းရန်ရှိသည်။ တယောက် ၁မတ်
Monday, 15 March 2010 at 13:51:00 GMT
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ ... ရသ အစုံပါပဲး) ။
ဒါနဲ့ .... လောဘရောင်းမည် ... တန်ဖိုး ၅ ကျပ်ဆိုရင်ကော ဘယ်နှယ့်ဖြစ်လာမလဲ ???
Tuesday, 16 March 2010 at 10:41:00 GMT
အဟ...... ခေတ်သစ်နောက်ဆုံးပေါ် ဗိုင်းရက်စ်
သတ်နည်းတွေ မလိုတော့ဘူး ။
ရောင်းရန်ရှိသည် တန်ဖိုး နှစ်ထောင်(စင်းဒေါ်လာ)
ဆိုပြီး ရေးထားလိုက်မယ်။ အဟီးးးးးး
Tuesday, 16 March 2010 at 15:16:00 GMT
နောက်တခါ ပျက်ရင် ၂ ကျပ်နဲ့ ရောင်းဗျ
ဈေးထပ်နှိမ်မှ ကြောက်မှာ ထင်တယ်။
အရှေ့မှာ ရေးလာသမျှကို နောက်ဆုံး အချိတ် လေး သဘောကျမိတယ်။
Tuesday, 16 March 2010 at 18:55:00 GMT
Friday, 19 March 2010 at 03:49:00 GMT